Bokin'i Ezekiela 47,1-9.12.
Nentiny niverina ho eo amin'ny varavaran'ny trano indray aho. Ary indro nisy rano nivoaka avy ao ambanin'ny tokonan'ny trano, amin'ny lafiny atsinanana, fa nitodika niatsinanana ny anoloan'ny trano; ka nidina ny rano avy ao ambanin'ny lafitrano ankavanana tao atsimon'ny otely.
Nentiny nivoaka tamin'ny alo-baravarana avaratra aho, dia nasainy nanodidina eo ivelany aho mandra-pahatonga eo amin'ny alo-baravarana ivelany mitodika miatsinanana; ka indro ny rano nandeha tamin'ny lafiny ankavanana.
Nony tafavoaka niatsinanana ralehilahy nitondra kofehy teny an-tànany, dia nandrefy arivo hakiho izy, ary nentiny nita ny rano aho, ka havalahana ny rano.
Nandrefy arivo hakiho indray izy, dia nentiny nita ny rano aho, ka halohalika ny rano. Nandrefy arivo hakiho indray izy dia nasainy hita ny rano aho, ka havalahana ny rano.
Nandrefy arivo hakiho indray, ka efa ony maria tsy azoko nitàna intsony, fa nihalalina ny rano; efa rano itàna milomano, ony maria tsy azo itàna amin'izao.
Ary hoy izy tamiko: Ry zanak'olona, nahita va hianao? Dia nentiny niverina ho eo amoron'ny ony maria aho.
Nony nitodika aho dia nahita hazo be dia be teo amoron'ny ony maria eo an-daniny roa.
Hoy izy tamiko: Ity rano ity dia mandeha mankany amin'ny faritany atsinanana; hidina ho any amin'ny tany lemaka vao hiditra ho ao amin'ny ranomasina; hoentina mankany amin'ny ranomasina izy, dia ho tonga mahasalama ny rano.
Ny zava-manan'aina mihetsiketsika any amin'izay halehan'ny ony roa na aiza na aiza, ho velona avokoa, ka ho be dia be ny hazandrano; satria raha vao tonga any ity rano ity dia ho tonga mahasalama ny ranomasina, ary hahavelona avokoa izay halehan'ny ony maria.
Eo akaikin'ny ony, amin'ny morony andaniny avy, hisy hazo mamoa isan-karazany haniry, ka ny raviny tsy mba halazo, ary ny voany tsy mba hitsahatra. Hamoa voa vaovao isam-bolana izy, satria hivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina ny ranony; ny voany ho fihinana tsara, ary ny raviny ho fanasitranana tsara.
Andriamanitra no arontsika sy herintsika,
famonjena azo mandrakariva amin'ny fahoriana.
Noho izany, tsy manan-tahotra isika, na hikoro aza ny tany,
na hietry any ambany ranomasina aza ny tendrombohitra,
Misy ony ka ny fandehany mampifaly ny tanànan'Andriamanitra;
ny fonenana masina onenan'ny Avo indrindra.
Andriamanitra no ao afovoany, ka tsy azo hozongozonina izy;
vao mazava atsinanana ny andro dia tonga hamonjy azy Andriamanitra.
Ny Tompon'ny tafika momba antsika;
ny Andriamanitr'i Jakoba no trano mimanda ho antsika.
Avia, jereo ny asan'ny Tompo,
dia ny fandravana nataony tety an-tany!
Evanjely Masin'i Jesoa kristy Nosoratan'i Md. Joany 5,1-16.
Taorian'izany, nisy andro fety tamin'ny Jody, ka niakatra tany Jerosalema Jesoa.
Ary any Jerosalema ao akaikin'ny vavahadin'ny ondry, dia misy dobo anankiray atao hoe Betesdà amin'ny teny hebrio, izay misy trano heva dimy.
Nisy marary maro nandry tamin'ireo trano ireo, dia ny jamba, ny mandringa, ny malemy, izay niandry ny fihetsiketsehan'ny rano.
Fa nidina tao anatin'ny dobo ny anjelin'Andriamanitra indraindray nampihetsiketsika ny rano, ka izay niroboka voalohany ao anatin'ny dobo rahefa nihetsiketsika ny rano, dia sitrana, na inona na inona aretiny.
Ary nisy lehilahy anankiray narary hatramin'ny valo amby telo-polo taona teo.
Nony nahita azy nivalandòtra teo Jesoa, sady fantany fa ela no naharariany, dia hoy izy taminy: Te-ho sitrana ve hianao?
Ary hoy ny navalin'ny marary: Tompoko, tsy mba manana olona handroboka ahy amin'ny dobo rahefa mihetsiketsika ny rano; ka nony mba mandeha aho, dia ny hafa no tafidina alohako.
Hoy Jesoa taminy: Mitsangàna, ento ny fandrianao ka mandehana.
Niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy, ka nentiny ny fandriany dia lasa izy nandeha. Ary sabata ny andro tamin'izay.
Koa hoy ny Jody tamin'ny vao sitrana: Sabata ny andro, ka tsy mahazo mitondra ny fandrianao hianao.
Fa hoy ny navaliny azy: Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe: Ento ny fandrianao ka mandehana.
Dia hoy ireo nanontany azy: Iza moa izany lehilahy nanao taminao hoe: Ento ny fandrianao ka mandehana, izany?
Tsy nahalala azy anefa ilay vao sitrana, fa ny vahoaka moa betsaka, Jesoa koa niala teo.
Taorian'izany dia hitan'i Jesoa tao an-tempoly ralehilahy ka hoy izy taminy: Indro efa sitrana hianao, ka aza manota intsony sao dia ratsy noho ny teo indray no manjò anao.
Dia lasa ralehilahy nilaza tamin'ny Jody fa Jesoa no nahasitrana azy.
Koa nanenjika an'i Jesoa ny Jody satria nanao izany tamin'ny andro sabata izy.